Ego ole ka ọ na-eri iji dochie derailleur? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otu esi edozi derailleur - choo azịza
Otu esi edozi derailleur - choo azịza
Ego ole ka ọ na-eri iji dochie derailleur?
Ọ bụrụ n ’iwere MTB gị n’ime ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe nankeziụgwọ na-dochiea n'azụderailleurga-abụ $ 110. Ọ bụrụ na ị Mee N'onwe Gịdochie onye derailleurgaegobanyere $ 50 (gbakwunyere oge gị) Nke a price ga-adabere a ọtụtụ na n'eziederailleurchọrọ. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ga na-ahụ maka nsogbu ndị ọzọ.
Otu n'ime nsogbu kachasị njọ ịnwere ịnwe igwe ma ọ bụrụ na ịgbanaghị gia nke ọma. N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi ewepụ, dochie ma gbanwee triangle azụ Shimano. Iji rụọ ọrụ ahụ, ị ​​ga-achọ otu setịpụrụ igodo Allen, onye na-ahụ ihe Phillips, onye na-apị apị, ihe eji agbụ ígwè, yana ikekwe ụfọdụ ndị na-egbu eriri.
Nke mbụ ịkwesịrị iwepu yinye gị. Ọ bụrụ na ịnweghị, lelee edemede anyị ebe a ka ị hụ otu esi eme ya. Iji wepu Shimano wheel wheel, ị kwesịrị ịkwụpụ eriri.
Tinye mech na STI gị na obere proket, jiri ngwa mkpaji dọpụta eriri mwepu na njedebe nke eriri dị n'ime. Mgbe ahụ tọpu eriri mwekota site na ịtọsa ya counterclockwise. Na ụdị Dura-Ace, nke a ga - achọ igodo Allen milimita anọ, mana ụfọdụ ụdị ochie nwere ike ịchọ nchi akwa millimita ise.
Ozugbo ịmechara nke a, ịnwere ike wepu ụdọ ahụ na mech. N'ikpeazụ, kpochapụ ihe nkedo a na-akpọ 5mm na derailleur ga-apụ site na hanga. Iji tinyeghachi onye derailleur na okpokolo agba, tinye ihe nkedo a na-atụgharị ya na hanga derailleur ma gbanwee ya na ntanetị gị na millimita ise hex ruo mgbe ọ ga-ata; ozugbo ọ malitere, ọ ga-adị mfe ikesiike mgbe ọ na-enweghị Nwere eriri eri wee wepụ ya wee bido ọzọ.
Tupu ị gafere, gbaa mbọ hụ na B na - eme ka ihe na-eme ka azụ na azụ dị n’azụ ihe nkwado ahụ. Nke a na-eme ka azụ mech mmiri buru ibu. Nke a B-tensioning ịghasa na-eji ohere ohere n'elu jockey wheel si kasị ukwuu pinion.
Ọ bụrụ na ụkwụ jockey dị oke nso, agbụ ahụ agaghị adaba n'ime elu toro eto n'ihi na ha ga-agabiga. Kpọghe ya n'oge na-adịghị anya ruo mgbe enwere ihe dị ka inch nke oghere n'etiti wiilị nkwado na nke kachasị ukwuu. Nke nwere nchara nchara, nke iberibe ma ọ bụ nke ochie na-adịghị mma ịgbanwe.
Yabụ mgbe ị nwere obi abụọ, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche iji dochie ha n'oge a. Iji wepu eriri dị n'ime, buru ụzọ jide n'aka na STI na-abanye nke ọma n'ime ala kachasị ala, wee tụgharịa akụkụ roba nke ST gị iji kpughee njedebe nke eriri ahụ. Chọta ebe a na-ekpughere eriri dị n'ime ma jiri aka gị kpoo ya.
Njedebe nke eriri ahụ na-apụ na STI na ị nwere ike ịdọpụ ya n'ebe ahụ. Iji gbanye eriri ọhụrụ, slide njedebe site na oghere dị n'èzí nke mpempe akwụkwọ STI ruo mgbe ọ pụtara n'ime, wee sụgharịa ya ruo mgbe eriri eriri ahụ gafere. Tinye eriri site na akụkụ mbụ nke eriri mpụga dị nso na njikwa ahụ wee gafere site na ndu eriri USB n'okpuru nkwado ala.
Na n'ikpeazụ site na mpempe ikpeazụ nke eriri dị na mpụga na site na mgbaghari nke mech. Tinye eriri nke eriri dị na mpụga n'ime eriri na-akwụsị etiti na gbọmgbọm. Ekwesịrị ịkpụzi gbọmgbọm ahụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ ga-aga.
Anyị na-agbanye ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị wee kpughee ya n'otu ụzọ iji kwe ka mgbanwe ọ bụla. Tọọ eriri ahụ site na nkedo na mech, n'akụkụ nke ị na-etinye ya na-adabere na ihe nlereanya ahụ, mana ị nwere ike ịhụ uzo ebe eriri kwesịrị ịnọdụ ala, jiri aka ya dọta ya dịka ị nwere ike dọpụta wee mee ka ịghasa ahụ wee . Ọzọ ịkwesịrị ịgbakwunye agbụ ahụ.
Mgbe ahụ ịkwesịrị idozi kposara elu na ala. A naghị eji ha eme ihe ngosi gị, kama kwụsịlata njem kachasị na ụzọ abụọ na usoro dị iche iche. Gbaa mbọ hụ na STI lever ahụ ka nọ n’ọnọdụ dị ala maka obere ihe mkpuchi na cassetị ahụ na agbụ ahụ dị na nnukwu mgbanaka dị n’ihu.
Mgbe ahụ dozie ogologo ịghasa ejiri akara H, gbanwee ya na ntanetị iji mee ka teknụzụ ahụ gaa na ngwa ndị ahụ, ịtọpụ ya ga-akpali mech n'ụzọ ọzọ. Wantchọrọ ịhazigharị ihe a ka wiilị nkwado dị elu dị n'okpuru obere cassetị mgbe elele anya azụ. Ọ bụrụ na mech ezughị ezu, agbụ ahụ agaghị agbanwe gaa obere ngwa.
Obere oke nwere ike ime ka agbụ ahụ gbapụ na cassette na jam megide etiti ahụ, nwere ike ịkpata nnukwu mbibi. Ozugbo i mere nke a, dobe ihu mech n'elu obere mgbanaka ahụ. Na iji STI levers ịkwaga n'azụ mech ruo nke kasị gia.
Ọ bụrụ na agbụ ahụ anaghị aga n'okporo ụzọ buru ibu, ọ pụtara na eriri anaghị enwe esemokwu zuru ezu ma ọ bụ na-adọta L-bolts oke oke. Ilele ma ọ bụrụ na ọ bụ USB erughị ala, jiri mkpịsị aka gị na mkpịsị aka aka pịa mech elu na pedals mgbe n'usoro mech. N'ihe banyere nnukwu okwute, eriri esemokwu bụ nsogbu.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ gaghị abanye na Bigcog mgbe ị na-amị amị, ị ga-atọpụ L-bolt. Bugharị pedal n'otu oge ka ị hapụ ha. N'ebe a, agbụ ahụ kwesịrị ịwụli elu.
Ngwa ngwa ịlele na elu jockey wheel na-kwekọọ na kasị pinion. N'akụkụ nke ọzọ, ọ bụrụ na L-Bolt ezughị oke na agbụ ahụ, ọ nwere ike ịwụfu ihe kachasị ukwuu ma kpoo cassette na ọnụ na etiti, mana ọ bụrụ na ị nwere ike iji aka gị mee ka ihe na-aga n'azụ. you'll ga-achọ Tobawanye esemokwu, iji mee nke a, kpughee ihe ndozi mmiri ahụ n'azụ azụ derailleur n'oge elekere ruo mgbe ọ ga-awụli elu na nke kachasị ukwuu. Ugbu a ka anyị gabiga mma n'iji ya gee ntị ma ọ bụ indexing Kwadobe, na-amalite kasị nta sprocket wee pịa STI nnofega menjuobi elu otu gia; ọ bụrụ na enweghị ike ịchọta sprocket na-esote, mee ka esemokwu ahụ dịkwuo site na ịtụgharị gbọmgbọm ahụ na-agagharị na ntanetịtụ ruo mgbe ọ ga-emeghe.
Tinyeghachi ya na ngwongwo pere mpe ma gbalịa ọzọ iji hụ na ọ na-arụ ọrụ. Pịa elu nke ọ bụla sprockets otu oge ruo mgbe i nwere afọ ojuju na yinye na-ọma ramping elu cassette. Tinyegharịa usoro ndị a na-amalite site na nnukwu sprocket ma laghachi azụ na cassette.
Jide n'aka na ọ na-arụkwa ọrụ mgbe ị nọ na cassette kachasị ukwuu na obere njikọ njikọ na ihu. Ọ bụrụ na agbụ ígwè dị n'etiti ahịhịa ahụ ekwekọghị, nke pụtara na ọ na-arụ ọrụ na akụkụ nke cassette ma ọ bụghị ihe niile, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe ihe nkedo derailleur, oghere gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ ụfọdụ esemokwu na eriri gị - ị nwere eriri dị n'ime ị kwesịrị ugbu a iji ebipụ a cable cutter. Hapụ ihe dịka sentimita ma ọ bụ sentimita atọ nke eriri na-apụta site na njedebe.
Mgbe ahụ tinye eriri na okpu ma pịa ya n'ụzọ dị nro na ngwa mkpaji. Kedu nsogbu arụ ọrụ ị nwere? Mee ka anyị mara n'okpuru ma anyị ga-anwa ịdepụta isiokwu ga-enyere gị aka, enwere ike ịchọta isiokwu ndị ọzọ dị ka www.youtube.com/gcn.
Enwere ike idozi derailleur?
MfeMmezi Derailleur. Mee ka igwe kwụ otu ebe gafere site na ịnwụderailleurjiri otu aka na ịrapara mgbọ hex 5mm n'imederailleurbolt (onye na-ejide yaderailleurna igwe kwụ otu ebe) na nke ọzọ. Itinye nrụgide na ma ihederailleurma sie ike iji nweta ihe ngechi ahụ kwụ ọtọ.Eprel 30 2010
Anyị na-etinye oge dị ukwuu na-elele mmezi nke GCN’s Monday maka ịnwale ịnya igwe anyị na-achọ ma na-arụ ọrụ dịka nke ọhụrụ. Mana ka anyị chee ya ihu, maka ọtụtụ n'ime anyị, anyị ga-anwa idebe akụkụ ochie. Ma obu ikekwe igharighari ma megharia akụkụ ochie iji mee ka ha rụọ ọrụ ọzọ.
N'iburu nke ahụ n'uche, lee otu esi emezigharị ihe ochie ochie ma weghachite ya na ndị nwụrụ anwụ. ♪ ♪ Ihe atụ a bụ Shimano Dura Ace 7700 azụ derailleur site na gburugburu 2002 m kwenyere. Ma ọ bụ ihe mara mma.
Ya mere, mgbe m ga-ewepụ ya ochie ochie cyclocross n'ihi na ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, enwere m nghọta nke ọma iwe iwe. Ka anyị lee ma ànyị nwere ike ime ka a dịghachi ndụ. Ihe mere eji agbaji ya, dịka ị pụrụ ịhụ, ejirila ike gwụ na wiilị ọzụzụ, mana nke a dị mfe iji dochie ya ma anyị nwere isiokwu na isiokwu ahụ.
Ma nke a na-arịa cones abụọ oyi kpọnwụrụ. Nke mbu ikwe ka ndi mmadu niile ghapu ya na ogwe gi. Nke abụọ, nke na-enye ohere ka wiil ndị na-akwado ya mee ka esemokwu ahụ daa, dị ka ị pụrụ ịhụ, na-ejide ya kpamkpam.
Anyị ga-amalite n'ụzọ dị mfe site na mkpocha nke ọma na degreaser soluble. Ihu ọma ọ dị mma karịa ịrụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ. ♪ Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime trunnions friza, dị ka nke a, ọ bụ n'ozuzu dị ka okwu nke ịtọpụ ya wee mezie nke ọma ma na-etekwa ya mmanụ, n'ihi na ha bụ naanị ihe na-eme nnyapade ma dị mfe.
Anyị na-eme nke ahụ ugbu a. Ọ bụ ọrụ dị mgbagwoju anya. Enwere otutu obere akụkụ ebe a kwesiri ka achikota ha n'usoro kwesiri.
Ya mere, jiri obere nlezianya gaa. Chetakwa, ihe ọbụla ị na-ewepụ, ị na-edekọ otu esi kewapụ ya. Ọ dị mma, ka anyị buru ụzọ mee elu ụzọ dị elu.
Nke mbu anyi kwesiri iwepu obere mgbanaka a. Dị ka ị nwere ike icheta, enwere ike iyi siri ike ebe a. Ọ na-amalite izu ike.
Ihe mbụ na-apụta bụ nke a, ya mere anyị B voltaji ukpụhọde efere. N'akụkụ nke ọzọ ị ga-ahụ obere oghere. Nke a bụ oghere olulu mmiri anyị na-abanye, ya mere buru nke ahụ n'uche.
Gbapụta ebe ahụ. Mgbe ahụ anyị nwere akara nke rụworo ọrụ ya nke ọma maka afọ 14. Mgbe ahụ, ee, anyị nwere isi iyi.
Anyị agaba. Ọ dị mfe n'ime. Nke ziri ezi, nke abụọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya.
Na mbido anyị ga-ewepụ wiilị nkwado ka anyị wee nwee ike ịbịaru ebe ahụ. ”“ Iji wepu obere mkpịsị ala a, anyị chọrọ igodo millen 5, nke anyị ga - ewepụ naanị. N'oge a, ị ga-akpachapụ anya nke ọma n'ihi na onu ụlọ derailleur amalitela ịtọhapụ yana anyị kwesịrị icheta etu o si atọpụ ya nke mere na mgbe a bịara itinye esemokwu ahụ, anyị ga-enweta ya.
Lee ọ na-aga. Enweghị m biceps. Ngwanụ, bia mgbe ahụ.
Njikere, ka anyị gawa. Oh nwoke lee ihe a. Ee, nke ahụ bụ ihe kpatara ya anaghị agagharị nke ọma.
You hụrụ nke ahụ? You nwere ike ịhụ nke ahụ? '' Ọ dị mma, anyị dị ọcha dị ka o kwere mee. You nwere ike ịhụ ugbu a na jaket ebe ahụ adịla mma ma ọ bụrụ na ị lelee anya. Yabụ na ọ dị anyị mkpa iji obere mpempe akwụkwọ wepụ akwụkwọ ahụ.
Mana olile anya, olile anya, naanị ịkọgharịghachi nke ọma ga-eweghachi ya ma ọ dịkarịa ala mee ka ọ rụọ ọrụ ọzọ. Mee ka mkpịsị aka gị gafee. ♪ Ahia! Olee afọ ojuju nke ahụ? Cheta na ka anyị na-eme ka ihe a sie ike, anyị ga-akwagharịkwa n'azụ derailleur ka ọ dị n'ọnọdụ ya.
Ọ bụrụ n’icheta, ihe nkwụsị ahụ bụ naanị n’azụ, yabụ ọ kwesịrị ihichapụ oghere derailleur. Ma mgbe anyị na-ikesiike na ịghasa ọ esetịpụ ya ebe. Ọfọn, nke ahụ na-arụ ọrụ ọzọ ugbu a.
Ka anyị gaa, hụchalụ. Lee anya na nke a. Obi dị m mma maka ndozi a.
Ugbu a, ka anyị mee mgbago dị elu. Yabụ, ehichachara ihe niile. Pụgharịa mkpọchi ahụ azụ, wee bụrụ oge opupu ihe ubi.
Nwere ike ịhụ oghere dị na ya, anyị kwesịrị ịchọta nke ahụ. I lee anya na nib a ị ga-ahụ na ọ bụghị ezigbo akara. Otu obere prong dị ogologo karịa nke ọzọ.
Ya mere, ogologo oge na-abanye n'ime ahụ nke derailleur n'onwe ya. Abụba ndị ọzọ. Ebe ahụ.
Ọ DỊ MMA. Akụkụ ikpeazụ a ga-abụ akụkụ aghụghọ. Ọ dị anyị mkpa itinye efere mgbatị B anyị maka oge opupu ihe ubi, yabụ ka anyị kwụ n'ahịrị.
Ma mgbe ahụ, anyị ga-atụgharị ya na elekere dị anya iji kwado mmiri ahụ ka anyị na-agbanye ya, jigide ya, wee jide mgbanaka mkpọchi anyị ma slide ya ka ọ banye ebe. Bịa mee ya. Ngwa! Ngwa! Abanye m! Ugbu a, ihe niile anyị ga - eme bụ ịkpọkọta wiilị na - azụ anyị na ngịga anyị.
Ekwuru m na azụ azụ a chọrọ wiilị ọzụzụ ọhụụ, mana opekata mpe ndị ochie ahụ ga-arụ ọrụ maka nke ahụ. Njikere maka oge nke eziokwu? Lee anya na nke ahụ. Ọ na-arụ ọrụ.
Ọ na-arụ ọrụ. Mgbanwe ohuru nke aShimano 7700 rear derailleur. Ọ lọghachiri n'ọrụ.
Nke a bụ usoro maka Shimano Dura Ace 7700 azụ derailleur. Imirikiti Shimano azụ derailleurs ga-adị ka nke a. Imirikiti Campagnolo azụ ga-adị ka nke a.
Mana SRAM, SRAM dịtụ iche. Yabụ, isi ebe dị elu ebe ahụ na-enweghị mmiri na ya. Yabụ na ọ naghị akpụkọta oge niile, mana ị nwere ike iteto ya oge ụfọdụ.
Ma na isi okwu dị na ebe ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ. Ya mere, anwala ichikota nke a n'ihi na ị ga-atọpụ ngwa ngwa. Ọfọn, ọ bụghị ogologo oge iji wepụta ihe na-aghọ ngwa ngwa nke akụkọ ntolite na ndụ.
N'ezie, ọ na-ewe budata ihe na-erughị otu awa. Yabụ na ịchọghị oge n'efu. Naanị cheta na mgbe ị nọdụrụ ala ịrụ ọrụ dị otu a, ị nwere ezigbo ebe ị ga-arụ ya ka ị ghara ịlafu obere ihe ọ bụla ị na-enyo enyo na akwa kapeeti ma ọ bụ, amaghị m, n'okpuru friji gị ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ma na oge obula, mgbe ichopuru ihe, legide anya na otu esi ewepu ya na nghota nke iberibe a n’ihi na dika m kwuru n’ebe a, nke ahu bu isi. Anyị agaba. Ugbu a, maka edemede ndị ọzọ na GCN, anyị nwere tọn zuru oke.
Gini mere ịdenye aha na channelụ? N'ụzọ ahụ, ị ​​maara banyere ya oge ọ bụla ọhụụ ọhụụ pụtara. Iji mee nke a, pịa na ụwa. Ọfọn, ị gaghị echefu eziokwu ahụ bụ na a ga-edozi wiilị ọzụzụ ndị a tupu m tinye ọrụ a n'ọrụ.
Yabụ, ịmata ka iji dochie wiilị ọzụzụ mgbe ikekwe ị dịlarị. Yabụ ị nwere ike pịa ebe ahụ. Ma ihe nke ọzọ dị mkpa bụ ịkọwapụta azụ azụ gị n'ụzọ zuru oke, anyị mere nke ahụ n'ebe ahụ n'okpuru microscope iji rụzigharị akụkụ ochie, nye isiokwu a mkpịsị aka aka, anyị ga-emekwu.
Kedu ihe igwe ịnyịnya ígwè m anaghị arụ ọrụ?
Ọtụtụ mgbe umengwụ na ịla azụ na-agbanwe n'ihi nsị jọgburu n'etiti ụlọ na-agbanwe agbanwe na eriri ngbanwe, kinks na eriri na / ma ọ bụ ụlọ, ma ọ bụ ụlọ gwụrụ. Dị ka n'elu, jide n'aka na gịderailleur, hanga, na cassette siri ike, ụkwụ gị na-anọ ọdụ nke ọma.Dec. 13 2018
Nsogbu mgbanwe nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ ịchọpụta ihe. Isiokwu a kpuchitere ụfọdụ ihe na-akpatakarị arụmọrụ adịghị ike azụ na etu esi edozi ya. Calvin Jones ebe a, Park Tool Company.
Mmezi ndị a na - ahụkarị maka ịgbanwee nsogbu bụ ihe ndị bụ isi: ịtọlite ​​kposara nkedo n'ụzọ ziri ezi ma dozie ntọala ndeksi. Maka ije ije na usoro ndị a, lelee edemede a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na inyochala ntọala ndị a na ihe ka na-adịchaghị mma You kwesịrị ilezi anya maka nsogbu ndị ọzọ ebe a.
Usoro eriri bụ ikpe na eriri dị n'ime ọnụ. Unyi na ahịhịa nwere ike ịrụ ọrụ n'ime ime. Nke a na - eme ka esemokwu dakwasị sistemu na - ebelata ma na - agbanwe ma ụzọ abụọ.
N’ọtụtụ ịnyịnya ígwè, ị nwere ike ileba anya na USB site na itinye ịnyịnya ígwè na ihe kacha dị ala. Mgbe ahụ, na-enweghị pedal, gbanwee derailleur ka ịtọghe eriri. Wepu ikpe ahụ na nkwụsị.
Na-eche na USB na-eche na ihe slide. I nwekwara ike ihichapu eriri ma tinye mmanu. Tinyeghachi ikpe ahụ ma lee ma ọ ga - enyere aka.
Ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe nwere ikpe zuru oke na enweghị nkwụsị ọ gaghị arụ ọrụ. Ikwesiri ịtọpu ihe nkedo ahụ iji nwee mmetụta maka etu ọrụ USB si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ na-adị ka roba, wụnye waya ọhụrụ na ikpe.
Nyochaa na mpụga nke ikpe ahụ, ọkachasị na nsọtụ. Mmebi dị na sistemụ ahụ agaghị enyere anyị aka ịgbanwe. Repgbanwegharị ikpe na waya bụ nhọrọ kachasị mma.
Onye derailleur na-arapara na etiti ya na hanga. Ibe a nwere ike ehulata site na mmetụta na otiti. Ihe a na-eme ka ihe a ghara ịkwado ya ma ọ bụrụ na ehulata.
Lelee ma mezie ihe nkwụnye nkwụnye ihe nkwụnye dịka DAG-2.2. Lelee edemede a dị iche iche ka ị gafere usoro nhazi nke derailleur niile.
Mgbe ejiri igwe dochie anya, nsogbu na-enweghị isi nwere ike ibili. Igwe kwụ otu ebe a nwere ihe ọghọm ma gbajie ihu igwe azụ ya. Ọ bụ ihe ọsọ ọsọ 10 ka anyị wụnye ihe ọsọ ọsọ 10 ka ihe niile kwesịrị ịdị mma.
Pụrụ iche stumpjumper price
Ma mgbe anyị nwalere ya, anyị nwere ike ijikwa obere ọmụmụ ihe na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ịgbanwee gaa na ngwa ahụ buru ibu, agbụ ahụ ga-adaba ugbu a n'ime ime wee mee onye na-akụ ya ihe. Anyị enweghị ike iji naanị gbọmgbọm ahụ mee ka ihe nkedo wee dị jụụ? Eeh, ọ rụrụ ọrụ na ngwa ndị ahụ, mana ugbu a, ọ na-alaghachi azụ raket yiri ka ọ kwagala ebe a.
Ọ bịara bụrụ na nsogbu ahụ abụghị na ndenye aha nke ntọala ma ọlị. Emebere MicroShift mbugharị a maka iji ya na SRAM n'azụ derailleur. Nsogbu ọzọ na-ekwekọghị ekwekọ nwere ike ịbụ ụdị agbụ na-ezighi ezi ọ bụghị naanị na obosara maka 9, 10, 11 na 12 gia, enwekwara ndịiche na akụkụ efere akụkụ.
Ngwọta ebe a, nnwale na njehie n'akụkụ, bụ ịrapagidesi ike na akara gị na usoro ịkwanye na ọtụtụ mmegbu, ha agaghị adịru mgbe ebighị ebi. Akụkụ nke agbụ ahụ, rollers na rivets, na-amalite ịgwụ, na-enye nro nke ịgbatị. Uwe a na akwa nwere ike ime ka ihe yinye ghara itinye aka na ntaneti na agbụ.
Nke a na - akpata ngbanwe na adịghị mma akwara. Lelee agbụ gị iji hụ ma ọ dị n'ime njedebe nke ejiji nnagide. Lelee ederede ọzọ maka ntuziaka maka otu esi eleba anya ịya akwa.
Nyochaa maka mmanu zuru oke. Ngwongwo akọrọ na-eche na ọ dị umengwụ mgbe ọ na-agbanwe ma na-eme mgbe ị gbanwere Ọ bụrụ na enwere oke mkpọtụ, agbụ a na-ele ma na-enwe nkụ ma ọ bụghị mmanu mmanu ga-apụ mgbe emetụ ya aka. Tinye nkedo nke mmanu na rivet obula, wee kpochapu ihe obula.
Ndị derailleurs niile na-aka nká oge ụfọdụ. Lelee nke a site na ịdọrọ n'akụkụ nke oghere dị ala. Tulee mmeghari a na uzo ohuru ohuru; isi ihe na-adịghị mma na ihe jikọrọ ya na-ebute ngbanwe na-ekwekọghị ekwekọ na naanị ihe ngwọta bụ mbibi ọhụụ ọhụrụ.
Nke ahụ bụ ya maka nhazi nsogbu nchụso azụ dị elu. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na-agbanwe agbanwe, lelee ederede ederede anyị na idozi ogige maka ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata. com - ma ọ bụ buru igwe kwụ otu ebe gị gaa onye ọrụ aka nwere ọrụ.
N'ikpeazụ, jide n'aka na ịlele Ntuziaka Ntuziaka Ntuziaka nke Park maka nyocha nke ihe niile anyị na-agbanwe na ntanetị. Maka anyị isiokwu ndị a tọrọ anyị ụtọ o mana ọ kachasị gị mkpa, anyị nwere olile anya na ha mere gị nke ọma. Ọ bụrụ otú ahụ, gwa ndị enyi gị.
Nye anyị mkpịsị aka. Nke ka mma, nọrọ nke gị Otu nzọụkwụ n'ihu ndị enyi wee denye aha, hụ gị oge ọzọ.
Ogologo oge ole ka onye nkwụsị kwesịrị ịdịru?
Ndị na-ere ahịagaikpeazụọ fọrọ nke nta ka ebighị ebi. Igwe ụkwụ jockey ga-aka nká n'oge (iri puku kwuru iri puku kilomita) mana usoro ndị ọzọ ekwesịghị ịhụ akwa dị mkpa.
Ego ole ka ọ na-eri iji dozie derailleur gbajiri agbaji?
Mgakwuo n'etiti $ 25 ~ $ 45 usd. Ọ bụrụ na ọ mere n'ụzọ ziri ezi ihe mbụ a ọkachamara arụzi ụgbọala ga-meewepu giderailleurma hụ naderailleurhanga kwụ ọtọ site na iji ngwa ọrụ pụrụ iche.
Ogologo oge ole ka derailleur na-anọ?
Gini mere derailleur ji nwude m?
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi nke a okuku, mis-nnofega ma ọ bụ na-abụkarị nanị ịbụ na-ezighị ezi gia mgbe yinye naderailleurnọ n'okpuru oke ibu ma ọ bụrụ na ụzọ gbagoro n'ụzọ siri ike ma ọ bụ na-amalite site na mbido na-anọ ọdụ / nkwụsị.
Kedu ka m ga esi esi dozie ihu m n’adighi aga?
Were mkpịsị aka gị dọọ eriri ahụ aka dị ka o kwere mee ma mee ka eriri arịlịka ahụ dị ọhụrụ. Gbalịagbanwee eluka ibu yinye. Ọ bụrụ na agbụ ahụ agaghịịgbanweema ọ bụ nwee mmetụta dị umengwụ, gbagọọ ihe nrịbama inline na-aga n'ihuelueriri (atụgharị ya mgbochi klookwaisi) dịkwuo esemokwu na-agbalị ọzọ.
Ugboro ole ka ị kwesịrị iji dochie derailleur?
Ndị na-ere ahịaga-anọru oge ebighị ebi. Igwe ụkwụ jockey ga-aka nká n'oge (iri puku kwuru iri puku kilomita) mana usoro ndị ọzọ ekwesịghị ịhụ akwa dị mkpa.
Kedu ihe m ga - eme gbasara azụ m azụ?
Idozi Mfe Dị Mfe 1 Ọ bụrụ na nsogbu mgbanwe agbanwee ngwa ngwa, dịka n'oge a na-agba ịnyịnya, gbaa mbọ hụ na cassetị gị enweghị osisi, ahịhịa na apịtị, nakwa na ụkwụ azụ gị na-anọdụ anọ Okwukwu ahụ nwere ike gbagọọ agbagọ. 3 Ọzọkwa nkịtị: kpudo njikọ. Ihe ndị ọzọ
Kedu ka ị ga - esi dochie anya mbibi n'ihu na iFixit?
Lelee iji jide n'aka na onu nke derailleur ga-ekpocha akwa-mgbanaka mgbe mgbatị ahụ gbatịkwuru. Were slack na eriri na-ebugharị na ngwa mkpaji wee mee ka bolt ahụ sie ike. Jiri eriri ngbanwe laghachi na derailleur, dọọ ya ngwa ngwa ma mee ka eriri arịlịka ahụ sie ike ka eriri ahụ wee daa.
Kedu ihe na-eme ka onye na-egbu ihe a ghara imebi emebi?
Mmebi nke onye na-egbu ihe na-apụkarị site na mmetụta ụfọdụ na derailleur. Ma lelee akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụrụ na ha akwagide mmebi ọ bụla. Nyochaa etiti, derailleur, yinye, eriri USB na ụkwụ azụ maka mmebi ọ bụla ma dozie ya tupu ịga n'ihu.